`Data File` xWebsiteObjectType `Native Document`]]> `Data File` xWebsiteObjectType `Native Document`]]> `Data File` xWebsiteObjectType `Native Document`]]> `Data File` xWebsiteObjectType `Native Document`]]> BTAP Videos Somali - City of Minneapolis
Fiidiyowyada B-TAP: Qorsheynta Geedi socodka Ganacsiga Magaalada
Closed Captioned in Somali
Hordhac ku socota Barnaamijka Farsamada Ganacsiga (B-TAP): da uu barnaamijka B-TAP u shaqeeyo.
Magaalada wa fahamsantahay in ganacsi walboo yar iyo dhexdhaxaad ah qorsheynayo nidaamka wuu adag yahay. Si loogu caawiyo in laka gooyo Geedi socodka ganacsiga Magaalada, B-TAP waxay aasaastay fiidiyow taxane ah oo u sharaxayo nidaam kasta tallaabo ka tallaabo. Fidiyow kastaa waxa lagu heli karaa Isbaanish, Soomaali iyo Hmong oo leh qoraalka dhow. Fadlan riix fiidiypwga hoose si aad wax badan uga baratid maadada.
Haddii qoraalada ama qoraalka turjumaadda aysan si toos ah uga soo muuqan fiidiyowga, riix sanduuqa yar ee gacanta middigta hoose ee fiidiyowga “cc.” Haddii aad doorbideyso qoraalka turjumaaddaay noqoto luuqad kale, riix aaladda sawirka koobaaban ee midigta “cc” si aad u beddeshid boosaska luuqada. Fiidiyowgan waxa lagu heli karaa qoraalada Ingiriiska, Isbaanishka, Soomaaliga ama Hmong.
Dulmarka illaha la heli karo si loogu taageero ganacsiyada oo ay ku jiraan caawinta farsamada, amaahyada, taagerada xulashada goobta, iyo wax badan.
Baro ganacsiyada u baahan shatiga, sida loo codsado, iyo sida loo cusbooneysiiyo shatiga.
Ansixinta Shirkad Ganacsi oo Liidata (DBE) iyo ka mid noqoshada
Baro wax ku saabsan nidaamka shahaadada.
Garashada Dib u Eegista Horumarinta
Nidaamka Qiimeynta Hormarinnta A ilaa Z. Haddii aad dhiseysid garoon ujeeddooyin badan leh ama aad ku dareysid deyr.
Ganacsiyada Cuntada Caafimaadka leh
Ku-dhaqannada ugu wanaagsan ee cuntada loogu talogalay ganacsiga Minneapolis.
Ganacsi la samrynta Magaalada Minneapolis
Sida loo helo fursadaha ganacsi, iyo la isaga diiwaangeliyo ganacsiga si aad u noqotid gorgortame.